Ndedzipi nzira dzekubvinza dzechisimbiso chemhete? Nei paine kuvuza? -CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd
Ndedzipi nzira dzekubvinza dzechisimbiso chemhete? Nei paine mvura yadeuka?
Time: 2021-11-25 Hits: 7
Kune akawanda marudzi ezvigadzirwa zvemhete pamusika, izvo zvinokwana kushamisa vatengi. Kune marudzi akawanda uye unhu husina kuenzana. Kusarudza chisimbiso mhete chigadzirwa chemhando yakashata zvakasikwa
haikwanise kutiunzira chisimbiso chinotarisirwa. Zvose zviri zviviri zvinyorwa uye fomu yakakosha zvikuru kuhutano hwemhete yekuisa chisimbiso.
Zvigadzirwa zvemhete zvekuisa chisimbiso zvemhando yepamusoro zvinowanzo kuve nekupenya uye kwakachena kutaridzika pasina kunamatira, mabhubhu, maburrs, nezvimwewo, uye hapana kushomeka kwezvinhu kana kuputsika mumhando, uye saizi inofanirwa.
zvakare kusangana nezviyero uye zvinodiwa nemushandisi. Kusarudza mhete yemhando yepamusoro inogona kubatsira zvakanyanya vashandisi kuderedza njodzi yekudonha. Izvo zvinotevera zvirimo zvinotsanangura zvakadzama akati wandei akajairika chisimbiso mhete
Leakage nzira uye zvikonzero zvekudonha:
Kuvuza kwakajairika kwemhete dzekuisa chisimbiso kwakakamurwa kuita mhando ina: interface kuvuza, kupinda mukati, kubuda kwekupararira, uye kukuvara kwekukuvara.
Nekuda kwekusakwana kudzvanywa kwegasket, kutsvedzerera kusina kunaka kana deformation yeiyo interface yekubata kumeso kunokonzeresa kuwanda kwekudonha pane yekuisa chisimbiso.
Nokuti zvinhu zvinyoro zvinowanzova fiber, zvinopinzwa nyore nyore nepakati, kunyanya pasi pekuita kwekumanikidza. Nekuda kweiyo capillary phenomenon, iyo yepakati ichapinda kune iyo
low pressure side, saka penetration leakage ichaitika.
Diffusion leakage inoreva kuvuza kunokonzerwa nekufambiswa kwezvinhu kwepakati kuburikidza nekuvharisa gap kana capillary chubhu yezvinhu zvekuisa chisimbiso pasi pekukurudzira kwekusungwa.
musiyano. Diffusion ichokwadi mhedzisiro yekufamba kwema molecular uye kazhinji haisi nzira imwe. Munzvimbo iyo yekuisa chisimbiso mutsauko idiki zvakanyanya kana muvacuum, zvinofanirwa kubhadhara
kunyanya kutarisisa kuitika kwemhando mbiri dzekudonha, sekupinzwa nekupararira, kune zvinhu zvinopinda nyore nyore senitrogen nehydrogen, uye zvinhu zvine chepfu uye radioactive.
Nzvimbo yekushanda yechikamu chekuisa chisimbiso chakanyanya kuomarara, kupisa kwemafuta kwakakura, uye kazhinji kunoenderana nekudedera, kukanganisa, kuisirwa zvisina kufanira, kusimba kwakanyanya, kudzokororwa.
shandisa, kudzvanya deformation, kushushikana kwemukati, kukuvadza kupfuura kuneta simba, uye zvinhu kuchembera Mamiriro ezvinhu akadai, kuderera, nezvimwe zvinokonzeresa kuvuza kunoparadza. Kudonha kwakadaro kunowanzo
zvakakomba, uye kukanganisa kuchave kwakakomba. Zvakakosha kusimbisa kudzivirira.
Zvadaro: Chinhu chikuru chinotevera mumusika wePTFE uri kuwedzera